Arzantina : Tanora mpitolona iray maty nandritra ny fifandonan’ny mpanao fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Jorge Gobbi Nandika (es) i Jorge Gobbi, Noele Belluard-Blondel, Naomy
Voadika ny 01 Janoary 2020 9:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, বাংলা, Aymara, македонски, English
Niafara tamin'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny bala an'i Mariano Ferreyra, mpianatra ao amin'ny oniversiten'i Buenos Aires sady mpikambana ao amin'ny Antokon'ny Mpiasa tamin'ny 20 oktobra 2010 ny fifandonana teo amin'ny mpitolon'ny sendikan'ny Firaisan'ny Lalamby sy ireo mpiasa manohitra ny fandroahana Mpiasa miaraka amin'ny mpitolon'ny antoko ankavanana. Tamin'ny ora nivoahan'ny lahatsoratra ôrizinaly amin'ny teny espaniola, mbola tsy fantatra izay tompon'andraikitra tamin'izany [Naotin'ny mpanitsy lahatsoratra: olona telo noahiahiana no nosamborina ary nanaovana famotorana ny iray amin'izy ireo]. Haingana dia haingana ny fanomanana andiam-pihetsiketsehana hanamelohana izao famonoana olona izao. Ny goavana indrindra tamin'izany dia nitranga tao amin'ny Plaza de Mayo, toerana mahazatra fanaovana fihetsiketsehana tao Buenos Aires, fa nisy ihany koa ireo famoriana olona tany amin'ireo toerana hafa tao an-drenivohitra.
Naneho setriny ny bilaogera tamin'ny fandrenesana ny fahafatesan'i Mariano Ferreyra izao. Nisy namana akaiky nanombana tao amin'ny Todos Gronchos fa :
Ny kolikoly, ny tsikombakomba teo amin'ireo sampan'asa fanarahamaso, ny polisin'ny Buenos Aires ary ny polisy federaly sy ireo alika romotry ny zandary kirchnériste, tena misy itovizana amin'ny an-dry De la Rúa, no namono an'i Mariano Ferreyra, zanakalahin'ny mpiara miasa amiko ao amin'ny sekoly fampianarana teknika ao Avellaneda. Ny tsy fisian'ny Fanjakana no namono azy; ny Fanjakana izay misintaka mba hampanankarena ireo namany sendikalista sy mba tsy hanelingelenana azy ireo.
Ao amin'ny Mendieta El Renegáu indray dia ireo “mitady tombony ara-politika” no resahana ho ao ambadiky ny fahafatesan'ilay tanora :
Ao amin'ny El Buen Salvaje voaheloka ny setriny avy amin'ireo mpanohana ny governemanta :
Namoaka fanehoan-kevitra mitovitovy amin'izany ny Revolución Tinta Limón. Nisy ihany koa ny fanamariham-pejy amin'ireo fikasana hanodikodin-doha avy amin'ireo fampitam-baovao mpanohana ny governemanta ao amin'ny bilaogy Señales.
Tsy nisy ny farangonteny (hashtag) tao amin'ny Twitter hanangonana ireo hevitra, fa saingy azo natao ny fikarohana tamin'ny alalan'ny voambolana “Mariano Ferreyra“.
Nandika (es) i Jorge Gobbi